Home » Creative Writing » သူမနဲ့အိမ်မက်
အရေးအသားလေး ကောင်းလိုက်တာ လရိပ်ရေ….
ဒါပေါ့ အူးတောင်ပေါ်သားရယ်….ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်နေရမှာပေါ့လေ…ကံအကျိုးပေးဆိုတော့လည်း ပြောရခက်သားပဲ..
ညွှန်းပေးမယ်ဆို ကျေးကျေးနော် အူးသူရ ရဲ့ အိမ်မက်က ပွင့်ပါတယ် ထင်တယ်…အာဟိ
ကျေးဇူးပါ အန်တီအေးရေ….နောင်ဘ၀ဆိုတာတွေများ ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေ ဝဋ်ကြွေးတွေ ကြေပါစေလို့….
Pretty woman ရုပ်​ရှင်​နဲ့​တော့​ပြောင်းပြန်​။
Pretty woman မှာက ဂျူလီယာရောဘတ် က သူမလိုမိန်းမ မဟုတ်လို့နေမှာပါ….
တကယ်တော့ Lost in translation ဖြစ်သွားတာပါ။
တချို့သော ယောကျာ်းများဟာ ဘယ်လိုပဲ ကဲပါစေ ကိုယ်ယူမယ့် မိန်းမ ကိုတော့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင်မှ ယူချင်ကြတာလေ အရီးရဲ့…သူမ မျှော်လင့်တာ မှားတာပေါ့…
ဟုတ်ပ မမဂျီးရေ…သူမ ကမှ အိမ်မက်မက်ခွင့်ရလိုက်သေးတယ်နော်….
( ၁ ) အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် KTV က ကောင်မလေးတွေက ၊
(၁)အယ် စမီး ဟိုတလောက ktv တခုသွားတာ သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းလေးတွေလဲ ပါတော့ သီချင်းထည့်ပေးဖို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်တာ ရင်ပြတ် ဂါဝန်အတိုလေးနဲ့ပါရှင့်…
…စေတနာနဲ့လဲလုပ်ပေးရသေးတယ်…ကွကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်ပြီး …ပါးကတီးပေးသေးတယ်…အိုဘယ့် ..အမျိုးသားများဘ၀…( ဟိုကောင်လေးကလဲ ငညံ့….ကေတီဗီသွားပြီး သူတော်ကောင်းလုပ်ရတယ်လို့ …) ..အဟိဟိ
တချို့ တချို့တွေကလည်း သူတော်ကောင်းလုပ်ချင်ကြတယ်လေ စပွန်ဆာပေးတာပေါ့…အားနည်းနေတဲ့ သူမတို့ဘ၀လေးတွေကို အားအင်တွေပေးချင်တာတို့ ဘာတို့…..အာဟိ
အရေးအသားကောင်းတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ကောင်မလေးပုံစံက သူ ချစ်တတ်လာရင် သူ့ဘ၀ကို လက်ခံနိုင်တဲ့အထိ ပြောင်းလဲလာရမယ်နော် ဇာတ်လမ်းကို အဲဒီလိုသိမ်းလိုက်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့…
ပြောတာ မရှင်းဘူး မနောပြောချင်တာ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ချစ်ရင် ကောင်မလေးဘ၀ကို လက်ခံနိုင်ရမယ် ပြောတာလား…အဲလိုတော့ ယောကျာ်း100မှာ 10 ယောက်လုပ်ပါ့မလား …အခုခေတ် ယောကျာ်းတွေက တွက်ချက်တာ မိန်းမတွေထက်သာတယ်နော်…မိန်းမကောင်းဖြစ်ရင်တောင် အချက်အပြုတ်လုပ်နိုင်ရုံတင်မဟုတ် လစာလည်းကောင်းရမယ် ၀င်ငွေလည်းရှာတက်ရမယ် အလိမ္မာအိမ်ပါ လည်းဖြစ်ရမယ် မေမေနဲ့လည်း တည့်အောင်ပေါင်းရမယ်တို့ဘာတို့ နဲ့…အဲလောက် တွက်ချက်တက်ပြီး နှလုံးသားနဲ့သာမက ဦးနှောက်နဲ့ပါ စဉ်းစားလာကြလို့ သူမလို မိန်းကလေးမျိုးကို ချစ်ခဲ့ရင်တောင် ဘယ်ယောကျာ်းမှ အမိုက်ခံပြီး ဘုရားသွားကျောင်းတက် ပွဲတက်မယားအဖြစ် တရားဝင် ယူဝံ့ကြမယ် မထင်ကြောင်း…အငယ်အနှောင်းအဖြစ်သာ စပွန်ဆာပေးပြီးယူချင်ယူကြမှာ…ဒါတောင် တော်တော်ချူပ်နီုင်တဲ့ ကောင်မလေးမှနော်….
ပြုံး ကိုလဲ တွေ့လိုက်လို့ စိတ်ကူးထဲ ပေါ်လာတာလေး။
သမီးပြောချင်တာ အဲဒါပါ အရီးရယ်…တချို့မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးမထားပဲ အလွယ်လမ်းလိုက်ကြတာကိုပါ…မဖြစ်လို့လုပ်ခဲ့မိရင်တောင် ပြန်မရုန်းထွက်ပဲ အဲဒီလောကမှာပဲ သာယာနေကြတာလေ….နုပျိုစဉ်သာ ရုပ်ပြစားလို့ရတာလေ…အရီးပြောသလို အလွန်ဆုံးခံ ၅နှစ်ပေါ့…အဲကကျော်သွားရင် ဘာလုပ်စားကြမယ်မသိ…စိတ်ပျက်လို့ ဒီအကြောင်းကို ရေးလိုက်တာပါ….
-ကိုယ့်ခွန်ကိုယ့်အားအပေါ်မယုံကြည်လို့ အလွယ်လမ်း လိုက်ကြသူများအပေါ် စာနာသနားရုံကလွဲပြီး -အထင်ကြီးလေးစားလို့မရ…
ဟုတ်တယ် ရွှေအိရေ….မိသားစု အခက်အခဲက လူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်….အဲလို မလုပ်ပဲ ဈေးပဲရောင်းစားဦး ထမင်းတော့ မငတ်ပါဘူး…အခုခတ်က ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ပေါလာတော့ အလှအပမက်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်နားမလည်တဲ့မိန်းကလေးတွေ ပျက်စီးကြတယ်…ကိုယ့်အားကိုယ်မကိုး ချင်ကြဘူးလေ…အလွယ်လမ်းလိုက်ကြတာများတယ်…ငယ်ရွယ်နုနယ်လှပစဉ်ခဏမှာ ယောကျာ်းတွေရဲ့ ဆန္ဒအတွက် ခဏတာ အသုံးချခံနေရတာ….ပြီးတော့ အဲဒီ ချစ်လှပါချည်ရဲ့၊သနားလှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ ယောကျာ်းတွေ တသက်လုံးစောင့်ရှောက်မလား မေးရင် ဘယ်သူမှ တာဝန်ယူရဲကြမှာမဟုတ်ဘူး….အပျော်အပါးမက်တဲ့ယောကျာ်းနဲ့ အလွယ်လမ်းလိုက်တဲ့မိန်းကလေးအချို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့…..
ကေတီဗီက ဘောင်းဘီတို ဘောင်းဘီရှည် ၀တ်တာများတယ်.. အူးကြောင်တို့လို
ရှေ့လူကြီးတွေ စကားက ကိုယ့်အိုးနဲ့ ကိုယ့်ဆန်တော်တာပဲ ဆိုတာပဲ သိတော့တယ်။
ဒါပေါ့ ကိုရင်ရယ်…မတော်တဲ့ဖိနပ် အတင်းထိုးစီးလို့မရတော့ သူ့အိုးနဲ့သူဆန် တန်တာပဲ ရမပေါ့….လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ အိမ်မက်မက်ရုံလောက်မက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါနော်….
ဟုတ်ပါတယ် အူးမိုက်….ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းက ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်သမိုင်းပဲပေါ့….ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးပေါ့လေ….
KTV ကကောင်မလေးမို့ မတူဘူး မတန်ဘူးတဲ့လား ဟုတ်မှာပေါ့ ဟုတ်မှာပါလေ
rite rite…အချစ်ဆိုတာ အသိနဲ့သတိအောက်မှာ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်နေခဲ့ရတာ အကြိမ်ကြိမ်…အဲ့စကားလေး ကောင်းလိုက်တာ အူးလေး မင်းကျန်စစ်ရေ….